Fitaovana maimaim-poana amin'ny tranokala izay hamonjy anao amin'ny fisintahana data - toro-hevitra
Ny angona angon-drakitra amin'ny fampiharana anao, na te hanala ny angon-drakitra ho an'ny fikarohana, ny fitaovana maoderina malaza amin'ny tranonkala dia afaka mamonjy fotoana maro ary afaka mitazona antsika hizaha. Izany no antony niresahantsika ireo fitaovana maoderina matanjaka indrindra sy maoderina izay tena mahavonjy ny fotoananao sy ny herinao.
Manokana manokana amin'ny fampivelarana rindrambaiko samihafa rindrambaiko toy ny scropping sy fitaovana fandinganana ny tranonkala sy ny birao ny Uipath. Ny web scraper Uipath dia vahaolana tonga lafatra sy tonga lafatra ho an'ireo tsy mpandrindra sy tsy mpanodina. Mety mora kokoa noho ny fanamboarana angona angona angona angona ny habaka, toy ny sari-tranonkala, ny famadihana flash, ary ny fandefasana rakitra PDF. Ilainao fotsiny ny manokatra ny mombamomba ny mpanamboatra rakitra ary manasongadina ny fampahafantarana tianao hakana. Avelao hanatontosa io asa io mandritra ny fotoana voatondro, ary ny vokatra dia tena ho ambony. Tsy ho ela dia hahazo ny CSV sy Excel ara-dalàna ianao. Amin'ny alalan'ity programa ity, afaka mamolavola ny fameno sy ny fikarohana ianao. Avelao aho hilaza aminareo fa ny karoka maimaim-poana dia misy karazany voafetra, fa ny avoakan'ny avo lenta dia lafo ary tsy mifanaraka amin'ny tompon'ny bilaogera na webmasters.
Import..io dia manome antsika fampiharana Desktop iray maimaim-poana ary manampy amin'ny famakiana ireo angona avy amin'ny tranonkala maro. Ity serivisy ity dia manasitrana ny tranonkala rehetra ho loharanom-baovao azo avy amin'ny loharanom-baovao ary miteraka API ho an'ireo mpampiasa azy. Raha sendra efa nomanina aloha ilay pejy natolotra anao dia ho azonao avy hatrany ny API. Raha tsy izany, Import.io dia afaka mitari-dalana antsika amin'ny alàlan'ny paikady hamoronana matromatika miaraka amin'ny fanampian'ny connectors sy ny mpanangom-bokatra ao anatin'ny 20 ora. Ity serivisy ity dia mahavariana sy mora ampiasaina, ary tsy mila fahaizana ara-teknika mihitsy ianao. Na izany aza, Import.io dia tsy afaka mivezivezy amin'ny takila tokana ho an'ny hafa miaraka amin'ny tsindry iray monja. Indraindray, roa andro no handefasana ny tatitra.
Kimono dia malaza ary iray amin'ireo fitaovana maoderina tsara indrindra amin'ny Internet mba hamonjena ny fotoanao amin'ny fitrandrahana. Ity programa ity dia malaza eo amin'ireo mpamorona sy mpandrindra programa izay te-hanome hery ny vokatra tsy misy code. Hanavotra ny fotoanao izany satria afaka manome ohatra tsara sy ratsy momba ny fampiofanana ity fitaovana ity ianao. Ankoatra izany, ny API dia natsangana ho an'ny tranonkala ny faniriana ary ny angon-drakitra dia azo aseho amin'ny endrika hafa. Miasa haingana i Kimono ary tena tsara ny mahazo angona momba ny tsenam-bola sy ny newsfeeds. Indrisy anefa fa tsy misy navigater'ny pejy, ary tsy maintsy maka fotoana kely hampiofanana ity fitaovana ity isika alohan'ny hamoahana antontan-taratasy marina ho anao.